आज \_मध्यराति देखि लागू भएको कर्फ्यू आदेश उलंघन गरे हुनेछ यस्तो कारबाही, – Khabar PatrikaNp
आज \_मध्यराति देखि लागू भएको कर्फ्यू आदेश उलंघन गरे हुनेछ यस्तो कारबाही,
काठमाडौं । उपत्यकासहित देशभर बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण भयावह हुने देखिएपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला मा बुधबार (आज) मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म निषेधा ज्ञा जारी गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, विक्री, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, मृत्युसं स्कार, सुरक्षा निकायलगायत अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र एक साता बन्द गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको हो ।
पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्या वश्य कीय वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्ध न, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्यु त्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टा इन, आइ सोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने–आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सह भागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यसैगरी कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन, मानिस भेला हुन, भीडभाड, सभा, जुलुस गर्न निषेध गरिएको छ । दैनिक आन्तरिक नित्यपूजाबाहेक मठ, मन्दिरलगायतमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सेवा, सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधिलगायतलाई पनि निषेध गरिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सम्भव भएसम्म विद्युतीय सेवा दिनुपर्ने र त्यो सम्भव नभए न्यूनतम कर्मचारीबाट आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको आदेश छ । हवाई उडानबाट बाहिर जानेका हकमा पास पोर्ट, भिसा, हवाई टिकट हेरेर सवारीसाधनलाई विमान स्थलसम्म जान सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।
आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रा मक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपा ल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसा धारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदे श उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Prevम्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा ज’लाएको आ’रोपमा ग्याल्जोम दोर्जे तामाङसहित ९ जना प’क्राउ
Nextमोबाइल हरायो यसरी भेटिन्छ …….
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ देख्ने बित्तिकै साक्षत शिबलिङको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस
डा. केसी र सरकारबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति, यस्ता छन सहमतिका बुदाहरु